ALEXIS WAYAN, Mpanoratra ao amin'ny TELES RELAY
ALEXIS WAYAN 160 Lahatsoratra 0 hevitra
Any Etazonia, ny ONG dia manameloka ny fanonganana an-tsokosoko ny tranon-jaza ao amin'ny toby ...
Alzeria: mpanao gazety Khaled Drareni voaheloka higadra 2 taona!
Ny mpisolovava azy dia efa nanambara ny fampiakarana fitsarana ambony momba ilay mpanao gazety any Algeria an'ny Reporters Sans Border. Ilay mpanao gazety Khaled Drareni tamin'ny 6 martsa 2020. | RYAD KRAMDI / AFP Nigadra nanomboka ny 29 martsa ...
Etazonia: hysterectomies mpanararaotra voalaza fa nanao fampisehoana tao amin'ny fonja tsy miankina iray tao ...
Raharaha sordid ity ary misy fiantraikany amin'ny vahoaka efa marefo. Ny ONG dia nametraka fitoriana tamin'ny governemanta amerikana ary nanameloka hysterectomies maro be natao tamin'ny vehivavy mpifindra monina napetraka ...
tantara an-tsarimihetsika Lohan natolotry ny trano fanontana HarperCollins!
Mila fotoana ny fanoratana boky, saingy toa nanaram-po elaela i Lindsay Lohan. Hatramin'ny taona 2014, HarperCollins dia niandry foana ny sora-tànan'ny fahatsiarovana nataony. Vokatr'izany dia nametraka fitoriana momba ny ...
Nanenina i Caitlyn Jenner fa tsy ray aman-dreny tsara ho an'ny zanany 4!
Talohan'ny nifindran'ny lahy sy ny vavy tamin'ny 2015, nandany ny fiainany tsy mahazo aina i Caitlyn Jenner tamin'ny maha-lahy voatendry azy tamin'ny nahaterahany. “Tsy nahazo aina mihitsy tamin'ny mombamomba ahy aho, na dia rehefa tena…
Miley Cyrus dia nanana traikefa ratsy tamin'ny fampitam-baovao momba ny fisaraham-panambadiana!
Tamin'ny fizarana vao haingana tamin'ny podcast an'i Joe Rogan, Miley Cyrus dia niherika ny fisaraham-panambadiany tamin'i Liam Hemsworth. Ary ny maheno azy dia tsy dia nisy toa azy ireo ny fomba nanehoan'ny haino aman-jery azy ireo. "Inona no tena mahasalama amin'ity ...
Nahemotra ny fitoriana an'i Johnny Depp amin'i Amber Heard!
Ny fanenjehana nataon'i Johnny Depp an'i Amber Heard any Virginia dia tsy hatao amin'ny volana Janoary. Ny mpitsara tompon'andraikitra amin'ny raharaha dia nanambara fa ny 3 mey 2021 dia hatao ny fizotran'ny raharaha. Ny mpilalao sarimihetsika Pirates of the Caribbean dia…
Prince Andrew: tsy handray anjara amin'ny fankalazana ny 100 taona nanjakan'i Philip rainy izy!
Ny fianakavian'ny mpanjaka dia mikasa ny hanao ny zava-drehetra mba hiarovana ny lazany. Raha mbola voafandrika amin'ny raharaha Epstein ny Printsy Andrew, dia norarana tsy ho amin'ny hetsika ara-pianakaviana ofisialy indray izy. Prince Andrew ...
Angry Neymar: miampanga ny mpilalao OM ho fanavakavahana ny kintana!
Ny duel nandrasana mafy teo anelanelan'ny PSG sy OM dia tena nitranga tamin'ny Alahady 13 septambra 2020. Ny kintana Paris Neymar dia nanosika ny mpanohitra an'i Alvaro Gonzalez, izay ampangainy ho fanavakavaham-bolon-koditra. Tsy nisy izany ...
Fito ka hatramin'ny valo: ny fijoroana ho vavolombelona mampihetsi-po an'ny reny izay "voahidy ...
Alahady 13 septambra 2020, natokana ho an'i Chrystelle ny sarin'ny Seven to Eight, reny izay ny zanany 8 taona dia resy lahatra fa tovovavy voahidy ao amin'ny vatan-dehilahy. Nihetsika ny farany, niverina tamin'ny tsy fahazoana aina tamin'ny zanany ...